Ahịa ahịa nke ụlọ ọrụ na-eduga gị na ihe ịga nke ọma | ECommerce ozi ọma
Ọrụ ahịa nke ụlọ ọrụ
Mgbe ị nwere eCommerce, ma ọ bụ ụlọ ọrụ ọ bụla, a na-ekwusi ike dị ukwuu na ịnwe ngalaba ahịa ma ọ bụ ma ọ dịkarịa ala ndị raara onwe ha nye ọrụ a. Ma ọ dịtụla mgbe ị chere ihe ọrụ ahịa nke ụlọ ọrụ bụ?
Ọ bụrụ na, dị ka anyị, ị ghọtara na ị maghị n'ezie ihe ahia ahia nke nnukwu ụlọ ọrụ, ma ọ bụ ọ bụrụ na ị na-eme ya nke ọma, echegbula, anyị ga-eme ka o doo anya.
1 Ọrụ ahịa nke ụlọ ọrụ dị oke mkpa iji nwee ihe ịga nke ọma
1.1 Nnyocha ahịa
1.2 Atumatu onu ahia
1.3 Mgbasa ozi na nkwukọrịta
1.3.1 Mkpa nke nkwurịta okwu
1.4 Nwee nchekwa data (ma ọ bụ wuo ya)
1.5 Mmelite na-aga n'ihu
Ọrụ ahịa nke ụlọ ọrụ dị oke mkpa iji nwee ihe ịga nke ọma
Ọ bụrụ na ị nwere azụmahịa, ihe kachasị mkpa bụ ka ọ nwee ihe ịga nke ọma, ọkachasị na mbọ ị gbara, ma ego ma oge gị, kwesịrị ya n'ezie, nri? Ọfọn, na nke ahụ nwere ike ịnwe ọtụtụ ibu iji lekwasị anya n'ihe na-arụ ọrụ. N'ihi ya, ọ dị mkpa ịmata ihe kachasị mkpa ahịa nke ụlọ ọrụ.
Gịnịkwa bụ ihe ndị ahụ?
Nke a nwere ike bụrụ ihe mgbagwoju anya nke ọrụ ụlọ ọrụ kamakwa nke nwere ike ịnye gị ozi kachasị yana nke iji nweta ezigbo nsonaazụ. Nke mbụ bụ n'ihi ga-elekwasị anya na mbọ gị na mpaghara nke enwere ike ghara iji ya mee ihe, nke na-aga inwe nnukwu ọchịchọ, wdg. Na nke abụọ, n'ihi na n'ụzọ dị otu a ị ga-enwe ike ịmata n'ozuzu ya ụdị ndị na-ege ntị ga-elekwasị anya, ndị bụ ndị asọmpi gị, otu ị si dị iche ...
Kwere ya ma ọ bụ na ọ bụghị, ọ bụ ihe nwere ike inyere gị aka ịme ụzọ gị, ọkachasị iru ndị ahịa ịchọrọ.
Iji rụọ ọrụ a, ọmụmụ ahịa, mgbasa ozi nke ngwaahịa ọhụrụ, a na-eme nyocha iji nyochaa mkpa (ma ọ bụ iji chọpụta etu esi enweta ngwaahịa ahụ), wdg.
Atumatu onu ahia
Uzo ozo nke ahia nke ulo oru bu nke a, ebe a na amuta ego kachasi nma maka ngwa ahia. Ma ọ bụ na ndị ọchụnta ego anaghị etinye ọnụahịa na nnwere onwe ha (ma ọ bụ na ọ dịghị ihe ọzọ ha ekwesịghị), kama ọ dị mkpa ịmụ ihe omume ndị ọrụ ga-abụ ma ọ bụrụ na ha hụ ngwaahịa na ọnụahịa ụfọdụ, ma ọ bụ na nke ọzọ .
N'ọtụtụ ọnọdụ Ọnụahịa ndị ahụ kpebisiri ike site na ọnụ ahịa nke nrụpụta ma ọ bụ inweta ngwaahịa ndị a yana ọnụ ahịa ndị asọmpi. Buru n’uche na ọ bụrụ na i tinye ya ọnụ ala, ndị mmadụ ga-enwe obi abụọ ma ha ga-azụ ya n’ihi na ha nwere ike iche na ogo ahụ adịghị mma. Ọ bụrụ na ị mee ka ọ dị oke ọnụ karịa asọmpi gị, ha ga-aga ebe ọzọ. N'ihi ya, ọtụtụ ọnụahịa na-adịkarị ka ọnụ ọgụgụ yiri ha (ma e wezụga mbipụta, clones na ndị ọzọ).
Mgbasa ozi na nkwukọrịta
Anyị nwere ike ịsị na ọrụ a bụ otu ihe kachasị mkpa na ngalaba ahịa na ebe ọtụtụ na-elekwasị anya ma metụtara mpaghara ọrụ a. Ma, Kedu ihe mgbasa ozi na nkwukọrịta pụtara?
Mgbasa ozi bụ ihe na - eme ka ngwaahịa gị, yana ụlọ ọrụ gị, mara ndị ọrụ. Were ya na ị nwere ụlọ ọrụ na-arụpụta ngwaahịa nke, ugbu a, ga-aga nke ọma n'ihi na mmadụ niile na-achọ ya. Ma ụlọ ọrụ gị enweghị mgbasa ozi, ị naghị akpọsa na ị gaghị ahụ anya. Ha ga-achọta gị?
Anyị enweghị ike ịsị mba na-ada mba, n'ihi na n'oge na-adịghị anya ị nwere ike ịpụ, mana ị ga-enwe ohere ole na ole karịa ma ọ bụrụ na itinye ego na mgbasa ozi maka akara gị, n'ihi na ị ga-enyere ndị ọzọ aka ịmata gị.
Ugbu a, iji mepụta mgbasa ozi, ị ga-ebu ụzọ mara onye ị ga-agwa okwu. Nke ahụ bụ, ị ga-emepụta onye zụrụ ya, onye ahia zuru oke nke ị ghaghị ikwenye. Iji mee nke a, ị ga-ekpebi ihe bụ afọ, mmekọahụ, ọrụ, ọnọdụ alụmdi na nwunye, ma ọ bụrụ na ị nwere ụmụaka, ọnọdụ mmadụ, wdg. nke ezigbo onye ahịa iji mepụta mgbasa ozi zuru oke nke na-aga ndị na-ege ntị.
N'aka nke ya, enwere ọtụtụ ọrụ ị ga-arụ, dị ka atụmatụ SEO na weebụ, ịchọta isiokwu ndị metụtara azụmahịa gị na ndị mmadụ na-achọ iji gbalịa ịbanye na nsonaazụ mbụ nke engines ọchụchọ.
Mkpa nke nkwurịta okwu
Meela mkpọsa, itinyela ego na mgbasa ozi maka ụlọ ọrụ gị ... Ma gịnị banyere mmekọrịta gị na ndị ọrụ? Ọ dị mkpa na Mepụta ha nkwukọrịta, ọ bụrụ ekwentị, email ma ọ bụ ọbụlagodi na netwọkụ mmekọrịta.
Ebumnuche bụ na ha echeghị na ụlọ ọrụ ahụ anaghị eche banyere obi abụọ ha ma ọ bụ nsogbu ha, kama na ha nọ ebe ahụ, ọ fọrọ nke nta ka ọ bụrụ gị na gị, ka ha wee nwee mmetụta dị mkpa na, karịa ihe niile, na ha gbasara gị.
Nwee nchekwa data (ma ọ bụ wuo ya)
Ọrụ a dịkwa mkpa n’ihi na, ọ bụrụ na ịnweghị onye gị na ya ga-ekwurịta okwu, olee otu ị ga-esi mee ka ozi gị gafere? Ya mere, ọ dị mkpa ịnwe nke a. Ihu ọma ọ bụ ịnwe aha na email (ma ọ bụ ụfọdụ ekwentị) nke ndị debanyere aha na nchekwa data gị. Ee, ị nwere ike iche maka ịzụ ọdụ data, mana ha nwere nsogbu abụọ: nke mbụ, na ọtụtụ n'ime ozi ịntanetị ndị ahụ adịkwaghị, yabụ ị na-akwụ ụgwọ ọkara nke ihe ịzụrụ; Nke abụọ, ọtụtụ n'ime ndị nọ ebe ahụ nwere ike ọ gaghị ekwenye ka ere data ha, yabụ ị na-eche nsogbu ihu ma ọ bụrụ na ha kọọrọ gị (ọkachasị aha ọma).
Yabụ ngalaba na-ere ahịa, otu n'ime ọrụ azụmaahịa ya na ụlọ ọrụ bụ nke a, mepụta ebe nchekwa data iji zipụ mgbasa ozi na onye ya na ya ga-ejikọ nkwukọrịta.
Ọrụ ọzọ bụ, n'enweghị obi abụọ ọ bụla, ịdị na-agbanwe mgbe niile. Dị ka ejiji ma ọ bụ ịchọ mma, ịzụ ahịa na-agbanwekwa, oge ụfọdụ ọsịsọ, ma ị nwere ike ịchọta onwe gị na ọnọdụ na, na mberede, ihe ị na-eme nke wetaara gị uru ugbu a, ugbu a adịghị.
Ọnọdụ ọhụrụ, ihe na-eme na mba ndị ọzọ (ọkachasị na United States), ejiji ... ihe niile ga - emetụta ire ahịa ka ịmegharị ọrụ ma mee ka ha gaa nke ọma.
Ugbu a na ịmara ụfọdụ ọrụ ahịa nke ụlọ ọrụ, ị ghọtara ihe kpatara ngalaba a ji bụrụ otu n'ime ihe kachasị mkpa yana ebe ị kwesịrị itinye ọtụtụ n'ime mbọ gị?
Pathzọ zuru ezu na edemede: ECommerce ozi ọma » Marketing » Ahịa ahia » Ọrụ ahịa nke ụlọ ọrụ